DARYEELAHA | Hsao2
Iyada oo adeegyo fara badan oo barnaamijyo ah, Ururka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO) waxaa loo aqoonsan yahay ilaha bulshada ee tayada leh xagga bixinta isuduwidda adeegga carruurta iyo dadka waaweyn ee leh baahi caafimaad hab dhaqan.
HSAO waxay sare u qaadaysaa jawi shaqo oo wanaagsan, oo isku-dheelitiran halkaas oo dadku si madax-bannaan uga fikiri karaan isla markaana ay ku biirin karaan fikradaha iyo xallinta si iskaashi leh. Fursadda Shaqada loo wada siman yahay waa mabda'a aasaasiga ah ee HSAO, halkaas oo shaqadu ku saleysan tahay kartida qofka iyo aqoontiisa iyadoon la takoorin sinjiga, midabka, diinta, galmada, nooca galmada, aqoonsiga jinsi, da ', asal wadan, curyaanimo ama astaamo kasta oo ilaaliya sida waxaa aasaasay sharciga. Nidaamkan Fursadda Shaqada Loo Wada siman yahay wuxuu quseeyaa dhammaan siyaasadaha iyo nidaamyada la xiriira shaqaalaynta iyo shaqaalaynta, magdhawga, dheefaha, joojinta iyo dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha kale ee shaqada.
HSAO waxay shaqooyin u soo dirtaa jagooyin kala duwan oo kaladuwan. Dhammaan jagooyinka waqtiga-buuxa waxaa ka mid ah mushaharka tartanta, xirmo faa'iidooyin aad u wanaagsan oo ay ku jiraan caafimaadka, ilkaha, aragga, howlgabnimada, marka lagu daro dheefaha kale iyo fursadaha horumarinta xirfadda.